Kushandira pamwe nekurwisana ne Knife Urombo OPEN INVITE - Element Society
Tsamba yakasununguka kune vatungamiriri vemo, vezvematongerwo enyika, vashandi vechidiki, vashandi, vunivhesiti, mabasa ehurumende, vechidiki, vanhu vose uye chero ani anoda kuti kuguma kwemupi mhosva kuve mumigwagwa yedu.
Munhu wose anoziva kuti banga remhosva ndiyo dambudziko guru munyika uye munzvimbo, kunyanya kunetsa vechidiki.
Isu tose tinofanira kushamwaridzana nechinangwa chekuparadza kupera mhosva kubva muguta redu. Zvakakosha kuti isu tose takabatana, takabatanidzwa mberi, nemashoko akafanana uye mazano anobatsira.
Dare redu reElement rave richishanda pamwe chete nevashandi pamwe chete neSouth Yorkshire Police uye Sheffield Hallam University kuti vatange kutsvakurudza mumaonero evechidiki pamudzimai wewaini nemhosva.
Nhamba yekutanga ye data yekutanga uye zvikwata zvakagadzirira uye ndakazvibatanidza izvi pakuguma kweblogi. Zvose zve132 vanhu vaduku vane 16-17 vakaongororwa. Tsvakurudzo inosanganisira nzvimbo dzose dzeSheffield. Isu tiri kuwedzera sendimu iyi kukura kwemwedzi mishomanana inotevera.
Kune vanhu vane 30 vechidiki (vakwegura vane 16 kusvika ku18) vanoda kuve vakapindira mumushandirapamwe wokudzivirira utsotsi. Vechidiki vechidiki vakaongorora vhidhiyo uye vanoparidza pfungwa. Tichavawo nehurukuro yemagetsi yemhosva inoshandiswa kuzvikoro uye vamwe vadzidzisi muSheffield.
Kune dzimwe dzakawanda zvekukurukurirana pamusoro pemakumbo kupara kunoitika muguta. Tinoda kuunza hurukuro idzi pamwe chete kuti tiite chero chinhu chipi nechipi chinoshanda sezvinobvira nekuderedza kuitika kwekuvharwa kwemupa uye nekugadzirisa hurongwa hwakanaka hwemangwana.
Shamwari yangu Will Earp (will.e@elementsociety.co.uk / 0114 2999 210) iri kutungamira ushamwari hwedu nevanoshanda navo.
Ndapota pinda mukana kana iwe uchida kupinda muchikwata cheboka, kana kuuya kuzotaura neni uye Will.
Inzwa wakasununguka kutumira iyi blogto chero waunofunga kuti unofanira kuva chikamu chekukurukurirana.
Preliminary * Ongororo yekuwana (n = 132) Pakati pevadiki vechidiki vakaongororwa:
90% yevanhu vakatakura banga vane vezera avo vanotakura makanga
43% inotakura banga inogara mune S6 kana S7
52% yaitakura banga yaiva White British
73% vanotenda vanhu vanotakura mapanga kuti vadzivirire, vanonzwa vasina kuchengeteka
16% vanotenda vanhu vanotakura mapanga nekuda kwemabasa echikwata
15% vanotenda vanhu vanotakura mapanga ekufananidza nehutano hwemagariro evanhu (kuonekwa se'kutsva 'nevezera rako.)
57% yevatori vechikamu vakataura kuti banga remhosva rinoitika nekuda kwebasa rinobatanidzwa nezvikwata, kana kuti kukakavadzana / kukakavara pakati pemapoka
67% yevaya vanoti vanotakura banga, vakapindura kuti vanhu vanotakura mapanga kuti vadzivirirwe, uye 63% vakapindura kuti bhomba rinoparadzaniswa rinoitika nekuda kwebasa rinoratidzira
(kunyanya iyo jaya inonzwa sokuti inofanira kutakura banga mumasangano akabatana nevechikwata kuti vadzivirire ivo pachavo)
* ichi ndicho chikwata chekutsvakurudza chinoenderera mberi uye idzi nhamba dzinobudiswa kubva kumuenzaniso wekutanga we132 vechidiki, kubva kuSheffield, ane makore anopfuura 16-17, akaunganidza July neAugust 2018.